सर्लाही–४ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
Thu, Aug 16, 2018 | 17:25:28 NST
12:11 PM (9months ago )
सर्लाही, कात्तिक २९ – सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेस, वाम गठबन्धन र राजपाबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. अमरेशकुमार सिंह, वामगठबन्धनका शिवपुजन राय र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राकेश मिश्र बिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. सिंह २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा १७ हजार चार सय मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । उहाँका प्रतिस्पर्धी शिवपुजन रायले १० हजार ३ सय ६६ मत र राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तेस्रो स्थानमा रहनुभएको थियो । त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा पनि तीनै नेता यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतीबेला मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उम्मेदवार राय १६ हजार ६ सय ७२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो ।
उहाँका प्रतिस्पर्धी महन्थ ठाकुरले १६ हजार ४ सय मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने कांग्रेसका उम्मेदवार सिंहले १० हजार मत ल्याउनुभएको थियो । २०६४ देखि नै चुनावी मैदानमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. सिंह र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रायबिच यो तेस्रो चुनावी भेट हो । तीन प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार मध्ये राजपाका उम्मेदवार राकेशमिश्र नयाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ । तीनै दलका उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा धेरै मतदाता रहेकाले आफुले चुनाव जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. सिंह आफू पार्टी र नागरिकबिच निकै लोकप्रिय नेता रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । सर्लाही–६ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि आफूले सर्लाहीकै विकास गरेको उहाँको भनाई छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनुभएका शिवपुजन रायले अहिलेको जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । आफूले २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा नै राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. सिंहलाई पराजित गरिसकेकोले अहिलेको चुनावमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारसँग आफ्नो प्रतिस्पर्धा नरहेको उहाँको दाबी छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित राय अहिले वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएकाले बलियो उम्मेदवार देखिनुहुन्छ ।
त्यसैगरी राकेश मिश्र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका सझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कमै समय राजनीतिमा बिताउनुभएका मिश्र मधेसका नागरिकले राजपालाई नै मतदान गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । मधेस अन्दोलन र मधेसीको माग पूरा गराउन पनि राजपाकै जित आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । मतदाताको हिसाबले ४ नम्बर क्षेत्रमा राजपा बलियो देखिन्छ । तर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले निर्वाचन क्षेत्र छाडेकाले पनि जित सुनिश्चित छ भन्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकको भनाई छ ।
यस निर्वाचन क्षेत्रमा ४ स्थानीय तह र बरहथवा नगरपालिकाको ८ वडा तथा विष्णु गाउँपालिकाको ४ वडा रहेको छ । गएको असोज २ गते भएको स्थानीय तह चुनावमा राजपा र कांग्रेसले दुई दुई स्थानीय तह जितेका थिए । बाँकी रहेको बरहथवा नगरपालिकाको ८ वडा मध्ये ४ वडामा वाम गठबन्धनले जितेको थियो । यस्तै विष्णु गाउँपालिकाका ४ वडा फोरम लोकतान्त्रिकले जितेको थियो । यो निर्वाचन क्षेत्रमा ९२ हजार ५ सय ४४ मतदाता रहेका छन् ।